Gama textile Anosizato Andrefana: mpiasa 70 sempotry ny fanafody famonoana bibikely | NewsMada
Gama textile Anosizato Andrefana: mpiasa 70 sempotry ny fanafody famonoana bibikely
Soa ihany fa nalaky voavonjy! Tratran’ny fahasemporana tampoka avy fanafody famonoana bibikely ny mpiasa miisa 70 ao amin’ny orinasa afakaba Gama textile Madagascar Sarl eny Anosizato Andrefana ny asabotsy maraina teo. Tsy nisy ny aina nafoy…
Raikitra ny fifanjevoana tao amin’ity orinasa afakaba ity, ny asabotsy maraina teo, nandritra ny famonjena ireto mpiasa sempotry ny ranom-panafody famonoana bibikely ity. Nanao tohivakana ny fitaterana ireo marary nihazo ny hopitaly HJRA. Tsy nanampo na inona na inona ireo mpiasa fa tonga niasa toy ny mahazatra kanjo nifanindran-dalana tamin’ny fandrarahana fanafody tao amin’ny orinasa izany ka niafara tamin’ny fahasemporan’ireo mpiasa sasany tao amin’ny orinasa. Araka ny fanazavan’ny solontenan’ireo mpiasa niharam-boina, nisy ny fandrarahana ranom-panafody famonoana bibikely ao amin’ny orinasa tamin’io fotoana io kanjo nentin’ny rivotra ilay ranom-panafody ka nahazo ny efitra nisy ireo mpiasa marobe ary nahatonga azy ireo tratran’ny fahasemporana. Tonga haingana teny an-toerana nanao ny asam-pamonjena ny avy amin’ny sampana mpamonjy voina sy ny “Corps de protection civile” (CPS) eny Ivato ary ny zandary avy ao Anosizato. Tonga teny koa ny avy ao amin’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka nijery ny zava-misy sy ny antony nahatonga ny fahasemporana teo amin’ireo mpiasa. Nambaran’ny talen’ny fampiroboroboana ny fahasalamam-bahoaka eo anivon’ny minisiteran’ny Fahasalamana, nandritra ny fitsirihana manokana teo anivon’ny orinasa, fa nisy olona miisa 70 tratran’ny fahasemporana tampoka nateraky ny poizina avy amin’ny fanafody famonoana bibikely tao amin’ity orinasa ity. “Isaky ny tapa-bolana no mandraraka fanafody famonoana bibikely ny orinasa, saingy tsy zakan’ireo mpiasa tao amin’ny orinasa izany ka nanempotra ny lalan-drivotra. Tsy misy atahorana ny fahasalaman’ireo mpiasa ary nampiasaina avokoa ny fanafody tahiry rehetra tao amin’ny hopitaly namonjena ireo marary”, hoy ny fanazavan’ny profesora Raveloson, talen’ny fampiroboroboana ny fahasalamam-bahoaka.
Tsy misy atahorana ny ain’ireo mpiasa…
Nalaky ny famonjena ka avotra soa aman-tsara avokoa ireo mpiasa rehetra niharam-boina tao amin’ny orinasa. Tsy misy atahorana kosa ny ain’ireo mpiasa ary afaka nody avy hatrany ny sasany amin’izy ireo rehefa nahazo ny fitsaboana sahaza azy raha mbola arahi-maso eny amin’ny hopitaly kosa ny sasany. Nanamafy hatrany ny eo anivon’ny minisiteran’ny Fahasalamana mba ho amin’ny andro tsy fiasana ny handrarahana ireny fanafody famonoana bibikely ireny amin’ireny orinasa vaventy ireny satria mitera-doza toy izao izany raha amin’ny fotoana ifamezivezen’ny olona no handrarahana azy ireny. Toy izany koa ny fikirakirana ireny fanafody famonoana bibikely any an-tokantrano ireny, tokony ho mailo hatrany ny isan-tokantrano. Misy ny laharana maitso 910 azo antsoina raha misy voina mihatra tampoka eny anivon’ny fiarahamonina eny, araka ny nambaran’ny avy amin’ny minisiteran’ny Fahasalamana hatrany. Marihina fa orinasa mpanamboatra ireny polo sy t-shirt ireny ity orinasa ity.